ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် လုပ်သင့်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ » ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် လုပ်သင့်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် လုပ်သင့်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
ခွဲစိတ်မှုအပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာလူနာတွေအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက သင့်ကိုဘယ်လိုခွဲစိတ်မှုမျိုးမှမဆို လျင်မြန်စွာပြန်ကောင်းစေပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုအပြီးပြန်သက်သာလာပြီး ခွန်အားပြန်ရလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ သင်သိထားသင့်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်လဲ ?
လေ့ကျင့်ခန်းက လူတိုင်းကို စိတ်ခံစားမှုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတိုးစေခြင်းအပြင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေက သင့်ကို ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေ ရစေပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေက သင့်ကိုကြံ့ခိုင်စေတယ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေတယ်၊ အလေးချိန်တက်နည်းစေတဲ့အပြင် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနဲ့ ဆီးချိုကိုပါ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ကခွဲစိတ်မှုတစ်ခုခုလုပ်ပြီးခါစဆိုရင် သင်လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ စွမ်းအင်တွေလောင်ကျွမ်းခြင်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့သင်က chemotherapy နဲ့ ဓာတ်ကင်ခြင်းကိုလု ပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင် ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက သိသာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပေးပါလိမ့်မယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကတောင် သင့်အတွက် ကောင်းကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုအတွင်းမှာ သင့်ကြွက်သားတွေက ကျုံသွားနိုင်တဲ့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ခြေလက်အကြောဆန့်ခြင်းက လိုအပ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုအပြီး နေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်ပေးခြင်းက မခက်ခဲပါဘူး။ ဒါက သင်မလွတ်သွားသင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ အထူးသဖြင့် ခွဲစိတ်မှုပြီးခါစ ရက်တွေမှာပေါ့။ တစ်ရက်ကို ၁ မိုင်ကနေ ၃ မိုင်အထိ လမ်းလျှောက်ပေးခြင်းကသင့်ကိုမြန်မြန်ပြန်ကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေက ကယ်လိုရီတွေကိုလောင်စေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပါတယ်။ အိပ်ယာထဲမှာ လှဲနေတာထက်စာရင် လှုပ်ရှားပေးခြင်းက မြန်မြန်သက်သာစေပါတယ်။
အရမ်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးမလှုပ်ရှားမိဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဒါက သင့်အနာကျက်ခြင်းကို သက်ရောက်မှုရှိလို့ပါ။ သင့်မှာနာကျင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ရပ်လိုက်ပါ။
အသက်ရှူခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းက ရင်ဘတ်ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဖြစ်ပြီး အဆုတ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ သင်လှဲချထားပြီး အသက်ကို ဖြေးဖြေးရှူပါ။ ရင်ဝမ်းခြားကြွက်သားကိုပြန့်စေပြီး လေဝင်နိုင်သမျှဝင်အောင် အသက်ဖြေးဖြေးရှူပါ။ လေကိုထပ်ရှူသွင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုမှ လေကိုအပြင်မှုတ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ၄ ကြိမ် ၅ ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးပါ။ ဒါကို တစ်ရက် ၆ ခါလောက်လုပ်ပါ။
Heel slides လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါ။
Heel slides လေ့ကျင့်ခန်းက သင့်ဒူးကို ကွေးဆန့်လို့ ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့က သင်လှဲချလိုက်ရပါမယ်။ ပြီးတာနဲ့ အဝတ်စကိုခြေဖဝါးမှာပတ်ပြီး ဒူးကိုအပေါ်ဆွဲတင်ပါ။ နေရတာ သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်တော့ဘဲ ဒူးထဲမှာဖိအားလေးတစ်ခု ခံစားလာရတဲ့အထိ လုပ်ပေးပါ။ အဲဒီအနေအထားအတိုင်း ၁၀ စကန့်လောက်နေပေးပြီး ဒူးပြန်ဆန့်ပါ။ ဒါကို ဆယ်ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်တဲ့အခါ လုပ်နေကျလေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပါ။ ပထမဆုံးလှဲချလိုက်ပြီး ခြေနှစ်ဖက်လုံးကွေးပြီး တစ်ဖက်ကိုဖြောင့်ဖြောင့်ဆန့်လိုက်ပါ။ ဒူးကိုတစ်ဖြောင့်တည်းထားပြီး ၆ ပေအမြင့်လောက် ခြေထောက်ကိုမြှောက်ပါ။ စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်နေပြီး ခြေထောက် ဖြေးဖြေးချင်းပြန်ချပါ။ ၄ ခါမြှောက်ပြီး ၄ ခါပြန်ချပါ။ ခွဲစိတ်ပြီး ၃ ရက်၊ ၄ ရက်မှာ ဒီ ၄ ခါမြှောက်ခြင်းကိုသုံးကြိမ်တစ်ကြော့နှုန်းနဲ့ ၆ ကြိမ်မှ ၁၀ ကြိမ် ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ပေးပါ။ သင်ကျန်းမာရေးကောင်းလာတဲ့ထိ အကြိမ်များနိုင်သလောက် များများလုပ်ပေးပါ။
လမစေ့ကလေးငယ်တွေအတွက် အသက်ရှင်သန်နိုင်မည့် သားအိမ်တု
Exercise After Surgery. http://www.breastcancer.org/tips/exercise/treatment/surgery. Accessed December 15, 2016.
Exercise and Nutrition After Breast Cancer Surgery. http://www.webmd.com/breast-cancer/exercise-nutrition-after-breast-cancer-surgery?page=3. Accessed December 15, 2016.
Exercise for Cancer Patients: Fitness After Treatment. http://www.webmd.com/cancer/features/exercise-cancer-patients?page=2. Accessed December 15, 2016.
Breathing and circulation exercises after surgery – transcript. http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/utilities/accessibility/transcripts/breathing-circulation-exercises-after-surgery. Accessed December 15, 2016.
Post-Surgery Knee Exercises. http://www.livestrong.com/article/108349-postsurgery-knee-exercises/
ကလေးငယ်တွေကို သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ
အိမ်ထောင်ပြုခြင်း, ချိန်းတွေ့ခြင်း နှင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကြောက်လန့်မှုနဲ့ ဘယ်လို သဟဇာတဖြစ်အောင် နေထိုင်မလဲ